TV | Somaliland Voice - Part 13
Daawo: Aad Waraysi Xiiso leh oo Saab Tv La Yeeshay mudane Mustafe Martin oo ku Sugan caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargaysa.
Mustafe iyo weriye Keyse ayaa ka sheekaystay waayo yaayo iyo wakhtigii ay dhalinyarta ahaayeen iyo arimo kale oo badan, daawasho wanaagsan.
Daawo: Madax-dhaqameedka,odayaasha, waxgardka, culimaa u diinka iyo bulshada beesha Gabooye ee ku dhaqan magaalada Burco ayaa cadeeyay in ay taageersan yihiin xisbiga Waddani.
Waxa kale oo ay si adag u dureen in xisbiga KULMIYE ku fashilmay taladii dalka wax dambena aan lagu aamini karin. Hadaladoodiina wax aka mid ahaa:
Daawo: Barnaamij ku saabsab Boobkii iyo Musuqmaasuqii Dhaxalkii Kulmiye
Kani waa barnaamij ku saabsab qaybo ka mid ah Boobkii iyo Musuqmaasuqii Dhaxalkii Kulmiye ee 7 dii sanno ee uu dalka xukumaayay oo u qaybsanaa 5 sanno oo sharci ah 2 sanno oo jujuub ah.
Musharaxa jagada Madaxweyne Ku Xigeenka ee Xisbiga Waddani Oo Qudbad qiimo badan u jeediyay Tageerayaal Ku Soo Biiray Xisbiga Waddani.
Kulmiye waynu aragnay oo iska daa wax kalee ilaa xabaalihii ayuu xaraashay. Hadii uu Kulmiye soo noqdo dadka ayuun baa u hadhay oo uu faasixi doonaa.
Mudaaharaad Saaka ka dhacay magaalada Hargaysa oo uu sababay Dugsigii Riis ee Hargeysa oo afaafkiisa hore la faasaxay
3rd October 2017 By Somaliland Voice
Hargeysa-(Somaliland Voice) Mudaharaad balaadhan oo aan cidi ku dhiman ayaa saaka ka dhacay magaalada Hargeysa ee caasimadda Jumhuuriyadda Somaliland.
Mudaaharaadkaas oo ay ciidamada Booliisku u adeegsadeen xabbado nool-nool dadweyne gadoodsanaa oo saaka ka bilaabmey afaafka hore ee Gugsiga hoose dhexe ee Sheekh Cali Cismaan ee loo yaqaano RIIS ee magaalada Hargeysa.
Dugsiga RIIS oo ku yaalla dhinaca koonfureed ee Tiyaatarka magaalada Hargeysa ayaa waxaa saaka ka bilaabmey mudaharaad ay sameeyeen dadweyne aad u cadheysan. Dawweynahaas ayaa waxa ay si weyn saaka uga gilgisheen kana soo horjeesteen in la dhiso barxada hore ee Dugsigaasi, kaas oo ay Wassaaradda Waxbarasahada Jumhuuriyadda Somaliland ay iibisey.
Xabbado nool-nool oo ay ridayeen Ciidamada Booliiska oo u adeegaayay shuftada ku mamay dhulcunimada iyo shiidka oo shicibka dhiidhiyay miciinsaday ayaa muddo dheer saaka ka socday goobtaas. Halkaas ayaa Ciidankii Booliiska ee difaacaayay hanti boobka iibisay afaafka hore ee gudsigaas lagu muquuniyay oo shicibkii gadoodsanaa ay cagta-cagta u saareen.
Saaka abbaaro 9 subaxnimo ayuunbaa la arkey afaafka hore dugsiga RIIS oo laga dhisey jiingad. dhismahaasi waxa siweyn uga cadhooday dadweynihii ka ag-dhawaa Isguulka oo gebi ahaanba bur-buriyay jiingadaasi laga hor bineeyey dugsiga.
Dhinaca kale waxa gadoodkii dadweynaha caasha loo geliyay Ciidamada Booliiska waxaanay goobtaas ka bilaabeen in ay xabbado nool-nool ku furaan dadkii mudaaharaadka dhigayey. Waxa la sheegay in Ardaydii Iskuulkaasi wax ku baraneysey dusha lagaga qufuley dugsiga si aaney mudaaharaadka uga qayb qaadan.
Wararku waxa ay intaas ku darayaan in usbuucii hore ay dugsigaasi tageen saraakiil ka socota Wasaaradda Waxbarashada, Arrimaha Gudaha iyo Dawladda Hoose ee Hargeysa kuwaasoo maamulka Isguulka ku wargaliyey in la iibiyay afaafka hore ee waqooyi ee dugsiga, lagana iibiyey niman ganacsato ah.
Waxa muddooyinkii u dambeeyey aad iyo aad u soo badanayay xaraashka guryaha dawlaldda iyo dhulka danta guud ah, iyadoo weliba uu Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) uu ka soo saaray wareegto lagu mamnuucayo iibka guryaha dawladda iyo dhulka danta guud ah hase yeeshee Masuuliyiinta xukuumadda Kulmiye ayaa u muuqda in ay moogyihiin amarkaas Madaxweynaha.
Daawo: Xisbiga Waddani oo ka hadlay wareegtadii Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland soo saaray.
Kaaliyaha dhinaca warbaahinta ee Murrashaxa Madaxweynaha xisbiga
mucaaridka ah ee WADDANI mudane Muniir Axmed Cigaal ayaa maanta ka hadlay wareegtadii
sadex qodob ahayd ee uu soo saaray Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed
Maxamuud (Siilaany) waxana uu farriin u diray Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta mudane Cismaan Cabdilaahi Saxardiid (Cadaani).
Anigu Waan Hubaa In Aan Wadaantayda Ka Buuxsanayo – Hogaamiye Xirsi
Daawo: Anigu Waan Hubaa In Aan Wadaantayda Ka Buuxsanayo Hogaamiye Xirsi Cali Xasan Xasan.